हिमाल खबरपत्रिका | सिंहदरबारको साँढे
साविक बमोजिम पूरक प्रश्न वा प्रतिक्रिया नहुँदा उदेकिंदै यसो मुन्टो घुमाएर हेर्दा त खेतबीचमा आफू एक्लै ठिंगिएको रहेछु। के गर्नु, भूकम्पले लिरिक्क पारो कि खेत, खलियान वा बारीको पाटोमा पुगेर मात्र खैरियत पुछ्ने बानी लाग्यो। असार १५ मा गह्रा सम्याएर पानी जमाएको खेतमा रोपाहार र बाउसेको नामोनिशान नदेख्दा त्यो फगत विभ्रम रहेछ भन्दै चोकैतिर फर्किएँ। झयालढोकामा छेस्किनी लगाएर मान्छेहरू घरभित्र थुनिएकाले चोक सुनसान थियो।
रोपाइँमा त गोरु जोतिन्छ, साँढेको के काम? बरु बाली पाके'सि सत्यानाश पार्न साँढे महाराज ढलकढलक पधारिनुहुन्थ्यो। तर्कनाकै बीच मैले फ्याट्ट भनें, “टिन ठटाएर खेदाउन छाडी सिल्ली साँढेसँग तर्सेर घरभित्र दुम्चिने?”
“तिमी भन्छौ नि!” घरमूलीले दुखडा सुनाए, “छिप्या बोको जस्तो दुङ्दुङ्ती गन्हाउने पात्तिएको साँढे छेउ कसरी पुग्नु? महिला देख्यो कि झ्म्टिहाल्छ, स्वाँकस्वाँक सुँघेर मर्छ, पड्के! हाम्रो इज्जत छैन? यस्तो डेन्जर साँढे छाडा होउन्जेल झयालढोका खोल्ने जोखिम मोलिन्न बा!”
“चड्कनचिउरा लगाउनुपर्नेलाई दहीचिउरा ख्वाए'सि पल्किंदैन त साँढे?”